Buyaas သတင်း - ဟို steroids ထုတ်လုပ်သူ
သင်ဟာကာယဗလလေ့ကျင့်ခြင်းအဘို့အ Anavar (Oxandrolone) အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို
နိုဝင်ဘာလ 16, 2018
Anavar (Oxandrolone) ကဘာလဲ? အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အမည်များ Oxandrin နှင့် Anavar အောက်တွင်ရောင်းချခဲ့ Oxandrolone (53-39-4), အခြားသူများအကြားတစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်နှင့်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပရိုတိန်း catabolism offset ကိုကူညီအမျိုးမျိုးအခြေအနေများတွင်အလေးချိန်အမြတ်မြှင့်တင်ရန်ကူညီရန်အသုံးပြုသည့်ဟို Steroid တစ်မျိုး (AAS) ဆေးဖြစ်ပါတယ် ရေရှည် corticosteroid ကုထုံး, ပြင်းထန်သောမီးလောင်ဒဏ်ရာများကနေပြန်လည်နာလန်ထူထောကျပံ့ဖို့အရိုးပွရောဂါနဲ့ဆက်စပ်အရိုးနာကျင်မှုဆက်ဆံဖို့, အဖွံ့ဖြိုးအတွက်ကူညီပေးဖို့ ...
(တဦးတည်းဆွတ်ခူးဘယ်?) Trenbolone Acetate vs Trenbolone Enanthate
နိုဝင်ဘာလ 17, 2018
Trenbolone enanthate ကဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်? Trenbolone enanthate (10161-35-8) နှင့် Trenbolone acetate (10161-34-9) ကိုအများဆုံးအသုံးပြုဟိုအန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Trenbolone Enanthate Trenbolone Acetate vs ရလဒ်များကိုနီးပါးတူညီကြသည်။ အဆိုပါခြားနားချက်တစ်ခုစီကိုတက်ကြွစွာ Trenbolone အခြေစိုက်စခန်း၏လွှတ်ပေးရန်ကြာသောအချိန်နှင့်တကွကြွလာ။ သူတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့ဆင်တူအသံသော်လည်း, Trenbolone Enanthate နှင့် ...
Masteron Propionate သို့မဟုတ် Masteron Enanthate? ဘယ်တဦးတည်းသင်တို့အဘို့ သာ. ကောင်း၏?
Masteron Propionate (Drostanolone Propionate) ကဘာလဲ? Masteron Propionate (521-12-0) နှင့် Masteron Enanthate (472-61-1) သေးငယ်တဲ့ခြားနားချက်နှင့်အတူ Masteron ၏မျိုးကွဲဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးထိုးဆေးဖြစ်ကြပြီးကာယဗလအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ခုအကြားအဓိကကွာခြားချက်သောက်သုံးသောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သူတို့ခံရသောထက်ဝက်-အသက်ပေတည်း။ Masteron Propionate သောက်သုံးသောသေးငယ်ပေမယ့်မူးယစ်ဆေးအစာရှောင်ခြင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ကြိမ်မြောက်ရှင်းလင်းရေးကတည်းကနေ့တိုင်းပေးထား ...